Home Wararka Gudaha Dagaal ka dhacay duleedka Kismaayo & faah faahin laga helayo
Dagaalka oo geystay khasaaro kala duwan ayaa waxaa uu ka dhacay degaan ku yaalla duleedka Magaalada Kismaayo ee Gobolka Jubbada Hoose, waxaana uu u dhaxeeyay Ciidamo katirsan kuwa Kumaandooska DANAB & Al-Shabaab.
Dagaalka ayaa waxaa uu ka dambeeyay kadib markii Xubno katirsan Al-Shabaab ay weerareen Kolonyo Ciidamada dowladda oo ka baxay Magaalada Kismaayo xilli ay marayeen degaanka lagu Magacaabo Yaaq Xaluul ee duleedka Magaalada Kismaayo.
Al-Shabaab oo sheegtay mas’uuliyadda weerarkaas ayaa sheegay n Kolonyada la weeraray ay qeyb ka ahaayeen Ciidamo Ajaanib ah walow saraakiisha Ciidamada DANAB aysan weli ka hadlin weerarkaas.
Waxaa jira khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah oo ka dhashay dagaalka, waxaana wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya degaanka Yaaq Xaluul ee duleedka Magaalada Kismaayo ay sheegayaan in xaaladda ay degan tahay, isla markaana Ciidamada dowladda ay socdaalkooda iska sii wataan.
Inta badan degaannada u dhow Magaalada Kismaayo ayaa waxaa howlgallo ka fuliya Ciidamada dowladda Soomaaliya & kuwa Jubbaland, iyaga oo mararka qaar weeraro kala kulma Xubno katirsan Al-Shabaab
Previous articleRW Rooble oo saakay dabaal u aaday xeebta Liido.
Madaxweynaha Hortiisa Lagu Dhaariyey.
JAWAARI oo si cajiib ah uga hadlay ololaha ‘guriga loogu dhisayo’...
Taliye Odawaa oo Ciidamada uga digay inay dhibaateeyaan Shacabka